‘चन्द्रागिरि नगरपालिका धुँवा धुलो मुक्त हुनुपर्छ’ - Aarsha Khabar
चन्द्रागिरि व्यक्ति विशेष
by Aarsha Khabar १५ कार्तिक २०७६, शुक्रबार November 1, 2019
तपाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिको सभापति हुनुहुन्छ, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्र वातावरण प्रदुषण मुख्यतः इँट्टाभट्टाकाको विषयलाई लिएर के भन्नु हुन्छ, यसमा तपाईको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
इँट्टाभट्टा सन्दर्भमा हामीले पहिले देखि नै कुरा उठाइरहेकै हौ । जतिबेला हामी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सर्वदलीय संयन्त्रमा रहि काम गर्दै थियौं । नगरपालिका वरपरका इँट्टाभट्टाहरुलाई हटाउने कुरामा धेरै चर्चा परिचर्चा गरेको र चर्चा परिचर्चाको साथसाथै सर्वदलीय बैठकमा हामीले हटाउने भनेर निर्णय पनि गर्यौ । निर्णय पश्चात मैले बुझेसम्म २–३ वर्षसम्मको समयावधी तोकिएरै कर पनि नलिकन यसलाई हटाउने प्रक्रियामा अगाडि बढाएकै हो । यसै क्रममा स्थानीय निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधिहरु आउनु भयो । जनप्रतिनिधिहरु आएपछि हामी सर्वदलीय टिमले गरेको कामहरुलाई निर्णायार्थ कार्यान्वयनमा लैजाने स्थिति बनाएनन् । अहिले इँट्टाभट्टा हटाउ अभियान सुरु भएको छ । यो एकदमै राम्रो काम हो । अहिले हामी हिजोको गाविसको स्थितिमा छैनौं । अहिले नगरपालिका, भोलि उपमहानगरपालिका उन्मुखतर्फ लागिरहेको हुनाले यो इँट्टाभट्टाहरुलाई तत्काल हटाउनु पर्छ । यहाँको जनतालाई इँट्टाभट्टाको धुलो, धुँवा खुवाई रोगी बनाउने होइन, अब निरोगी बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । यसो गरे नगरपालिका स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमय नगरपालिका बन्दछ । स्वस्थ नगरपालिकाले नै समृद्धिको कार्य गर्न सक्छ ।
अहिले इँट्टाभट्टा हटाउ अभियान सुरु भएको छ । यो एकदमै राम्रो काम हो । अहिले हामी हिजोको गाविसको स्थितिमा छैनौं । अहिले नगरपालिका, भोलि उपमहानगरपालिका उन्मुखतर्फ लागिरहेको हुनाले यो इँट्टाभट्टाहरुलाई तत्काल हटाउनु पर्छ ।
इँटाभट्टा पिडित संघर्ष समितिले नगरपालिकालाई ५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा अघि तपाई सर्वदलीय संयन्त्रमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ, आफैले गरेको निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन किन ?
त्यतिखेर नगरपालिकाको कामहरुलाई अगाडि बढाउने हिसाबले पार्टीको तर्फबाट सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा मात्र मेरो उपस्थिति थियो । त्यसो हुँदा मैले गरेका कामहरु निर्णायार्थ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा संयन्त्रमा हुनेहरु थिएनौं । अहिले स्थानीय तहमा जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिहरु छन् । निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई गम्भीर भएर हेर्नु पर्थ्यो र हेर्नुपर्छ । सर्वदलीय टिममा अहिलेको मेयर पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, म आफै पनि थिए । मेयर साबले यसलाई हिजो सर्वदलीय टिमले पनि निर्णायार्थ अगाडि बढाएको र त्यसपछि उहाँलाई जनताले पनि यो नगरपालिका स्वच्छ, हराभरा, सफा र विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ भनेर जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्था छ । उहाँले हिजोको निर्णयलाई पनि सम्झनामा राखेर नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर अगाडि बढेको भए यो एकदम राम्रो हुने थियो । यद्यपी उहाँले त्यसलाई गर्न सक्नु भएन । यो सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा उहाँको पाटीसँग सम्बन्धीत छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यही कारणले उहाँले यसलाई निर्णायार्थ अगाडि बढाउनु सक्नुभएको छैन ।
मसँग सम्बन्धित कुरा गर्दा म आफै पनि प्रदेश सभाको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छु । जतिबेला म निर्वाचित भए निर्वाचित भएको केही समय पश्चात नै मलाई लाग्छ, तीनथाना, विष्णुदेवी र थानकोट साइडको साथीहरुले इँट्टाभट्टाले पारेको प्रभाव र यो इँट्टाभट्टालाई हटाउने अभियानसँग सम्बन्धित रहेर ज्ञापन–पत्र नै दिनुभएको थियो । त्यो ज्ञापन–पत्रसँग सम्बन्धित हुँदा यहाँहरुलाई प्रष्टै छ कि प्रदेश सरकारले आफ्नो गतिविधि सिधै स्थानीय स्तरमा संचालन गर्न पाउँदैन । त्यसो हुँदा हाम्रो गतिविधि, हाम्रो कामहरुलाई अगाडि बढाउने हो भने स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर नै हो । मैले मेयर, उपमेयरसँग बसेरै धेरै पटक छलफल गरे । छलफल गर्दा पनि यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । मैले थाहापाएअनुसार केही दिन अगाडि इँट्टाभट्टा पिडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा ठूलो जुलुससहित इँट्टाभट्टा हटाउन मेयरलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउने काम भयो । यो एकदमै सह्रानीय काम भएको हो । हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई स्वच्छ, हराभरा र इँट्टाभट्टा मुक्त नगरपालिका बनाउनु पर्छ । त्यसो हुँदा यो अभियानलाई काँधमा काँध मिलाउने सन्दर्भमा मेरो पनि साथ र सहयोग रहने छ ।
मैले थाहापाएअनुसार केही दिन अगाडि इँट्टाभट्टा पिडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा ठूलो जुलुससहित इँट्टाभट्टा हटाउन मेयरलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउने काम भयो । यो एकदमै सह्रानीय काम भएको हो । हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई स्वच्छ, हराभरा र इँट्टाभट्टा मुक्त नगरपालिका बनाउनु पर्छ ।
तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा १८ वटा सामुदायिक वन छन् । ति सामुदायिक वनलाई जोडेर पर्यापर्यटनको योजना के बनाउनु भएको छ ?
सबै भन्दा पहिलो हामीसँग पर्यापर्यटनसँग सम्बन्धित थुप्रै ठाउँहरु छन् । मातातीर्थ, इन्द्रदह, मच्छेगाउँ, थानकोट आदिनारायण आदि पर्यापर्यटनका स्थलको रुपमा रहेका छन् । सामुदायिक वनसँग सम्बन्धितको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग थुप्रै अवसरहरु छन् । त्यो अवसरहरुलाई एकीकृत रुपमा अगाडि लान जरुरी छ । २०२० लाई पर्यटन वर्षको रुपमा सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ । यसलाई टेवा दिनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ । यदि अवसरहरुलाई एकीकृतरुपमा अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने घोषणाको लागि घोषणा मात्र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले विशेषत सामुदायिक वनसँग मात्रै कुरा गर्ने हो भनेपनि म निर्वाचित भएको क्षेत्रमा १८ वटा सामुदायिक वनहरु छन् । सामुदायिक वनहरुलाई हिजोको सन्दर्भसँग जोडिएर हेर्ने हो भने संरक्षण गर्ने, रुख ठूलो बनाउने, त्यहाँबाट घाँस, पत्कर, दाउरामात्रै लिने थियो । हिजो नाङ्गो डाँडा थियो त्यसलाई संरक्षण गर्न जरुरी थियो । त्यसो हुँदा हामीले जनतालाई पनि त्यही अनुसारको गाइड गर्यौ । त्यही अनुसार उहाँहरुले पनि सामुदायिक वनहरुलाई संरक्षण गर्ने तर्फमात्र अग्रसर हुनुभयो । अब त्यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढिसकेका छौं । हिजो फल प्राप्त गर्ने, लिने हिसाबले वन रोपण गरौं, संरक्षण गरौं, अब फल लिने बेला भयो । अब हामीले सामुदायिक वनलाई जोडेर पर्यापर्यटनको हिसाबले काम अगाडि बढाउनु पर्छ । यो कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको यो दोस्रो प्लानिङमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रको वडा नम्बर ९ मच्छेगाउँको डाँडामा रहेको बुद्धस्तुपा देखि ग्रीन पदमार्ग सुरु गरी वडा नम्बर २ मसिनेसम्म पुर्याइने लक्ष्य लिइएको छु । अब चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेका जनता पदमार्गको हिसाबले पैसा तिरेर समय खर्च गरेर अन्य क्षेत्रमा जान नपरोस्, नगरबासी र अन्य व्यक्तिलाई पनि हाम्रो ठाउँमा आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ । यही विषयलाई लिएर चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपमेयरसँग पनि छलफल भएको थियो । उहाँले पनि यो राम्रो काम भएकोले नगरपालिकाले यसलाई थप सहयोग गर्ने बचन दिनुभएको छ । अब उहाँसँग पुनः एकपटक बसेर छलफल गर्ने सोच मैले बनाएको छु ।
तपाई प्रदेश सांसद हुनभएपछि गर्नुभएका महत्वपूर्ण कामहरु के–के छन्, ती मध्ये आफुलाई सबैभन्दा सन्तुष्ट लागेको काम कुन हो ?
पहिलो वर्ष क्षेत्र विकास कोष थिएन, यस वर्ष छुट्टाएको छ, त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । निर्वाचनको दौडानमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएको कुरा हो एक घर, एक धारा, यातायातको राम्रो व्यवस्थापन, यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम । निर्वाचनको क्रममा धेरै ठाउँमा जाँदा पश्चिम भेगमा बस्ने जनताहरुले पैसा तिरेर पनि सर्वसुलभ ढंगले यात्रा गर्न पाएनन्, यातायातको राम्रो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरुले आग्रह गर्नुभएको थियो । आफू निर्वाचित हुनासाथ नेपाल यातायातमा गई जिएमसँग भेटे । त्यसपछि मयुर यातायातको जिएसँग पनि भेटे । नेपाल यातायातले केही समय लाग्ने बतायो भने मयुर यातायातका जिएम धेरै उत्साहित हुनुभयो । मयुर यातायातले हामी तुरुन्तै संचालन गछौं भन्यो । यसअघि थुप्रै यातायात संचालनमा भएपनि जुन हिसाबले जनताले सर्वसुलभ ढंगबाट यात्रा गर्न सकिरहेका थिएनन्, मयुर यातायात, चन्द्रागिरि यातायात र साझा यातायात संचालनमा आएपछि त्यो समस्या हटेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको विशेष गरी पश्चिम भेगमा बस्ने जनताले यात्राको सन्दर्भमा अहिले सर्वसुलभ तरिकाले यात्रा गर्न पाएका छन् जस्तो लाग्छ । यो कुरामा म एकदम सन्तुष्टि छु ।
कामकारवाहीको सन्दर्भमा कार्यविधि तयारी भैसक्यो भन्ने छ । तर, यद्यपी मेरो हातमा कार्यविधि परेको छैन । योजना कुन तहको कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरा कार्यविधिले गाइड गर्छ । मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था रहेन । बाटो, कुलो, स्कुल, खानेपानी बनाउने र मर्मत गर्ने भनेको निरन्तर गरिरहने प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया अन्तरगत गरिरहँदा सरकारको चार वटा अंग मध्ये चौथो अंगको रुपमा चिरपरिचित पत्रकारहरुलाई कहि कसैले पनि प्लानिङमा राखेको देखिदैन । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको एउटा वडामा ४ करोड रुपैयाँ जान्छ । त्यो वडाले पनि मिडियासँग सन्दर्भित रहेको योजना बनाएको म देख्दिन । नगरपालिका समग्रले पनि बनाएको पाईदैन । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीको हिसाबले म त्यहाँ कार्यरत छु । म प्रदेश सरकारको नीति योजनाहरुलाई हेर्छु, त्यसमा पनि नीतिगत हिसाबले योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाइरहेको देख्दिन । त्यसो हुँदा खेरी कार्यविधिले कस्तो खालको गाइड गर्छ मलाई थाहा छैन । हामीले दुई वर्षको अन्तरालमा धेरै काम गर्यौ, सबै काम ओझेलमै छ । जबसम्म संचारमाध्यमका साथीहरुलाई साथमा लिन सकिदैन त्यो फेरी पनि ओझेलमै रहिरहन्छ । त्यसो हुँदा गरेका काम र गतिविधिहरुलाई अगाडि ल्याउनको लागि मिडिया सेक्टरमा मेरो काम गर्ने एकदमै इच्छा छ । तर, कार्यविधिले गाइड गरेअनुसार त्यसलाई म अगाडि बढाउछु ।
२०२० लाई पर्यटन वर्षको रुपमा सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ । यसलाई टेवा दिनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ । यदि अवसरहरुलाई एकीकृतरुपमा अगाडि बढाउन नसक्ने हो भने घोषणाको लागि घोषणा मात्र हुन्छ ।
मेरो गतिविधि, मैले गरिरहेको कामहरुको सन्र्दभमा आर्ष नेपालले अगाडि बढाउने जुन सोचाइ राख्नु भएको छ यो नै एकदमै राम्रो कुरा हो । अब एउटा काम तुरुन्त अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । एक वर्ष हामीले काम गरिसक्यौ । कुन काम गर्दा कति सजिलो भयो ? के कारणले गर्दा सजिलो भयो ? सजिलो सँगसँगै अप्ठ्यारोहरु पनि छन्, त्यो अप्ठ्यारो के के आए ? त्यो अप्ठ्यारोलाई तपाईले कसरी फेस गर्नुभयो र, आउँदो दिनमा तपाईको प्लान कस्तो छ ? त्यो कुराहरुलाई अगाडि लान सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसरी जान सकियो भने पाटी र हामी कुन बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने कुरामा मानिसहरु छर्लङ्ग हुन्छन् । यो कुरा छुटाउन हुँदैन । विषयगत रुपमा अघि बढ्दै जानुपर्छ । म कहाँ दौडिरहेको छु । हामी सबै दौडेको दौडेइ छौ, जननिर्वाचित पदाधिकारीहरु आ–आफ्नो स्थानमा दौडेको दौडेइ छन् । कार्यपालिकाका सदस्यहरु पनि दौडेकै छन् । दौडेको किन ? त्यो दौडाइलाई एकै ठाउँमा हामीले व्यवस्थपन गर्न सक्यौं भने दौडाइ कम उपलब्धि धेरै हुन्छ । त्यो हुन सकिरहेको छैन, त्यसैमा हो मलाई चिन्ता । चाडबाड भनिदैन, परिवार नभनी दौडेको दौडेई छौं । दौडिएको उपलब्धि जनतामाझ देखाउन सक्नुपर्छ ।
काठमाडौंको नाग पोखरीमा छठको तयारी
प्रधानमन्त्रीको उपचार अब बालुवाटारमै
चन्द्रागिरिमा कुकुरको बन्ध्याकरण
Aarsha Khabar March 7, 2020 March 7, 2020
चन्द्रागिरिमा दुर्व्यशन त्यागौं भन्दै र्याली
Aarsha Khabar June 22, 2019 June 22, 2019
चन्द्रागिरि प्रवेश गर्न हात धोई, ज्वरो नाप्नु पर्ने
Aarsha Khabar March 20, 2020 March 20, 2020